Sida loo raadiyo filim aan magaciisa la aqoon | I sii wakhti firaaqo
Sida loo raadiyo filim aan magaciisa la aqoon
Waxaa jira dhibaato ay xitaa kuwa ugu wanaagsan ee daawada filimada inta badan la kulmaan nolosha ... Ma xasuusto cinwaanka filim gaar ah si aad u daawato ama ugu taliso! Suuragal maahan inaan xusuusano magaca filim kasta oo aan aragnay. Warka fiicani waa taas tiknoolajiyaddu waxay gacan ka geysan kartaa dib u cusboonaysiinta xusuustayada oo hel filimkaas oo aad noo xiiseeya maadaama aan u baahanahay oo kaliya inaan soo bandhigno furayaasha raadinta qaarkood. Maqaalkani wuxuu tilmaamayaa XNUMX-tusaha tusaha raadinta filim adiga oo aan garanayn magaca.
Bal qiyaas dhacdadan: waxaad timaaddaa guriga shaqada ka dib oo waxa kaliya ee aad rabto waa inaad ku nasato TV -ga hortiisa oo aad daawato filim. Waxaad ka raadinaysaa Netflix oo ka mid ah xulashooyinka ay soo bandhigto ma heshid wax aad jeceshahay ... Isla markiiba waxaad xusuusataa filimkii aad jeclayd markii aad ku aragtay shineemada oo lagaa tagay rabitaankii ahaa inaad mar kale aragto. Dabeecadda ugu weyn waa jilaa aad jeceshahay wuxuuna kaa qosliyey cod dheer. Waxay u taagan tahay ikhtiyaarka ugu fiican, adiga uun baa wajahaya dhibaatada: Waa maxay magaca filimka?
Ha ka welwelin! xaaladaha noocaan ah waxay leeyihiin xal fudud oo degdeg ah. Waxaad u baahan tahay oo kaliya xusuustaada oo aad leedahay internet.
Tilmaamuhu wuxuu ka kooban yahay tallaabooyinka soo socda:
Ururi macluumaad intii suurtogal ah
Ka fiiri mashiinka raadinta Google
Isticmaal ilaha macluumaadka khaaska ah
Hoos waxaan ku sharraxayaa mid kasta oo iyaga ka mid ah si weyn:
1 TALLAABADA 1: Ururi macluumaad badan intii suurtogal ah
2 TALLAABADA 2: Ka fiiri mashiinka raadinta Google
3 TALLAABADA 3: Adeegso ilo macluumaad oo khaas ah
TALLAABADA 1: Ururi macluumaad badan intii suurtogal ah
Falanqayntan yar ayaa saldhig u ah oo tan waxaad u baahan tahay taageerada xusuustaada si aad u hesho ujeeddada, isticmaal tusaalooyinka soo socda:
Yaa ama yaa xiddig ka ah qorshaha
Magaaladee filimku ka dhacayaa
Muuqaal gaar ah oo aad xasuusato (Dinosaurs -Roobabyo waawayn oo weeraray magaalada Hong Kong. Lammaane baabuur fuushan ayaa qof waddada dul mara, iwm)
Sannadkii la qiyaasay waxaad aragtay filimka
Waa kuwee dadka aad la socotey markii aad aragtay maadaama ay ka kooban yihiin il toos ah oo xog ah oo mararka qaarkood kuu badbaadin karta waqti iyo dadaal raadinta
Nooca filimka: naxdin, jaceyl, shaki
Dalka uu ka soo jeedo filimka
Weedhaha gaarka ah ee qaar ka mid ah wada -hadalka filimka
Waxyaabaha aadka u muuqda ee goobta (saacadaha, dheemanka, kabaha, nooca armaajada, iwm.)
Waxay ku saabsan tahay ururi xog badan intii suurtogal ah si aad u hesho xog gaar ah taas oo aad wax ugu tari doonta tallaabooyinka xiga.
TALLAABADA 2: Ka fiiri mashiinka raadinta Google
Waa suurtagal in la sameeyo su'aalaha fudud ee mashiinka raadinta si aad u hesho cinwaanka ee filimka muuqaalka ah ee aan raadineyno. Aad bay u sahlan tahay, waxaan u baahanahay oo kaliya inaan ku saleyno tallaabada 1 iyo tusaalooyinka hoos ku qoran:
Waa maxay magaca filimka uu Bruce Willis yahay daweeyaha wiil arka jinniyo? (Dareen Lixaad)
Filimkee ayaa lammaane ku dhunkanaya dushooda xilliga duufaanta? (Xusuus qorka Noa)
Waa maxay magaca filimka halkaas oo qoraa khiyaano leh lagu eedeeyo inay dishay lamaanayaasheeda? (Dareenka Aasaasiga ah)
Cinwaanka filimada ugu caansan Audrey Hepburn
Magaca Filimka Isbaanishka oo uu nin carruurtiisa u kaxeeyo iskuul oo uu ogaado in gaarigiisu uu bam yahay (The Unknown)
Waa maxay filimka superhero ee ugu guulaha badan muddooyinkan dambe?
Magaca filimka ay jilayaan Penelope Cruz iyo aktarad kale oo ay fasax u aadaan Barcelona oo ay jeclaadaan isla ninkaas (Vicky Christina Barcelona)
Xaaladaha badankood, raadinta filimkaaga ayaa ku dhammaan kara halkan. Google dhab ahaantii waa caawimaad weyn waxayna leedahay amarrada raadinta ee lagama maarmaanka ah si aad u heshid dhammaan macluumaadka la heli karo.
TALLAABADA 3: Adeegso ilo macluumaad oo khaas ah
Haddii aad halkan timaaddo, waxay ka dhigan tahay in filimka muuqaalka ah ee aad raadinayso uu aad u gaar yahay. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira aalado onlayn ah oo kaa caawin doona inaad hesho filimka aad u baahan tahay. Waxaan hoosta ku sharaxayaa ilaha macluumaadka ugu habboon ee inta badan la isticmaalo:
Waa maxay filimkaygu? Waa mashiinka raadinta oo laga sameeyay Finland ujeeddadiisuna tahay inay ka caawiso adeegsadaha inuu raadiyo filimada isagoo adeegsanaya ereyada furaha ah ee lagu dhex galo mashiinka wax -raadinta guud. Erayadani waxay u baahan yihiin in lagu qoro Ingiriis oo lagu qeexo qayb ka mid ah qorshaha. Macluumaad faahfaahsan ayaa sahli doona raadinta. Waa mid ka mid ah matoorada raadinta ugu wax -ku -oolka badan tan iyo markii loo sameeyay inay ka fikiraan falanqaynta taxanaha fiidiyaha. Soo -saaraha madalku waa Valossa oo ujeedadiisu tahay inuu meeleeyo mareegaha sida "mashiinka raadinta ugu horreeya ee ku saleysan taariikhda sharraxaadda". Mid ka mid ah astaamaha ugu waaweyn ayaa ah inay leedahay tilmaame amar amar oo la mid ah kii loo adeegsaday Shazam iyo Siri. Goobtu waxay leedahay in ka badan 45 kun oo filim oo ku jira faylalka.
Filmaffinnimo. Waa bog uu ka abuuray Spain dhaliilaha Pablo Kurt Verdú. Waxay u shaqeysaa nooc ka mid ah shabakad bulsheed halkaas oo adeegsadayaashu ay ku soo jeedin karaan talooyinka filinka iyada oo loo marayo abuurista liiska. Waxaa ku jira xog -ururin ballaaran oo leh faylal filim kasta oo ay ku jiraan qoraal kooban, iyo sidoo kale macluumaad ku saabsan agaasimaha, taariikhda la sii daayay, isjiidka, nooca, tirakoobka, qiimeynta, iwm. Aaladda ugu weyn ee ay bixiso waa fursad aad kula sheekaysato dadka kale oo aad ku hesho ra'yigooda.
IMDB (Xogta Filimka Internetka). Waa mid ka mid ah ilaha ugu wanaagsan ee loo yaqaan xogta duurka ee heer caalami ah, waxaa la abuuray 1990. Waxaa ku jira isjiidjiyeyaasha, iyo sidoo kale dhammaan macluumaadka la xiriira filim muuqaal leh. In kasta oo aysan ku siinin raadinta faahfaahsan ikhtiyaar ahaan, waxaad ku tiirsanaan kartaa raadinta filimada jilaa waxaana hubaal ah inaad heli doonto xoogaa caawimaad ah.
Goobaha filimada iyo baloogyada. Waxay yihiin il aad u fiican oo macluumaad ah maadaama ay jiraan dad aad u tiro badan oo ka qayb gala golayaasha oo kordhiya fursadaha sababtuna tahay furfurnaanta ay matalaan. Ilaha qaarkood waa kuwan soo socda: Cinemania, Saacadaha Lumay, Filimka Wadarta, Blog de Cine iyo Torrentfreak.
Guud ahaan, baadi -goobku waa inuu noqdaa mid degdeg ah, si kastaba ha ahaatee waxaa muhiim ah in la xusuusto faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan filimka aad rabto inaad yareyso waqtiyada raadinta. Waxaan kugula talinayaa inaad fiiro gaar ah siiso marka markaad ilowdo cinwaanka filim si dhib yar aad u xalliso.
Wadada buuxda ee maqaalka: I sii wakhti firaaqo » cine » Sida loo raadiyo filim aan magaciisa la aqoon
Taxanaha TV -ga ugu wanaagsan ee 2018
Magacyada Amiiradaha Disney